Ragga ayaa ugu badan dadka u dhinta xanuunka Corona-virus. - NorSom News
Ragga ayaa ugu badan dadka u dhinta xanuunka Corona-virus.
Sida laga ogaaday tirokoob lagu sameeyay dadka ilaa hada caalamka u dhintay xanuunka Corona-virus, ragga u dhintay xanuunkan ayaa labo jibaar ka badan dumarka.
Tusaale ahaan, 566 qof oo cudurka ugu dhimatay dalka Spain, waxaa haween ahaa 190 qof, halka raggu ay ka ahaayeen 376 tiradaas kamid ah.
NB: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah(Norway, Sweden iyo Denmark), halkan riix(Subcribe/Abonner).
Sabab kamid ah sababaha arintan loo ciladeeyay, ayaa la sheegay inay tahay in xanuunada ku dhaca ragga da´da ah ay ka badanyihiin kuwo ku dhaca dumarka da´da ah.
Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen dhakhaatiirtu, xanuunkan ayaa saameynta ugu xoogan ku yeesha dadka da´da ah ee qaba xanuunada ay kamid yihiin dhiig karka, sonkorta, kansarka, neefta iyo cudarada uu qofku daawada joogtada ah ka qaato.
Xigasho/kilde: Nesten dobbelt så mange koronadødsfall blant menn som blant kvinner.
Previous articleDaawo: Sh Abyad: qaabkee loo dhaqaya qofka muslimka ah ee u dhinta Corona-virus
Next articleDhageyso: Sababta ay soomaalida ugu badan ugu dhimatay cudurka Corona-virus.